अर्घाखाची समाज जापानद्वारा अर्घाखाची अस्पताललाई ५ थान सिलिन्डर सहयोग - Samatal Online
अर्घाखाची समाज जापानद्वारा अर्घाखाची अस्पताललाई ५ थान सिलिन्डर सहयोग
बुटवल। अर्घाखाँची समाज जापानले अर्घाखाँची अस्पताललाई ५ थान इलेक्ट्रिक अक्सीजन कन्सनट्रेटर मेसीन हस्तान्तरण गरेको छ । जिल्लामा अक्सीजनको अभाव बढेसंगै कोरोना संक्रमीतको उपचार हुन नसकेको गुनासो आएपछि समाजले बिरामीको उपचारमा सहज होस् भनी मेसिन हस्तान्तरण गरेको हो ।
रकम पठाएको छोटो समयमै ३ वटा मेसिन आएको र विरामीले सेवा लिन सुरु गरेको अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डेन डा. कपिल गौतमले जानकारी दिनुभयो । देशभर अक्सीजनको अभाव भएकोले ५ वटै मेसिन एकै पटक ल्याउन नसकेकोले २ वटा मेसिन केही दिनमा आउने डा. गौतमले बताउनुभयो ।